အမေရိကန်၊ ဗြိတိန်နှင့် သြစတြေးလျ တို့ လုံခြုံရေးမိတ်ဖက်သစ် ဖွဲ့စည်းကြောင်းကြေညာ - Xinhua News Agency
အမေရိကန်၊ ဗြိတိန်နှင့် သြစတြေးလျ နိုင်ငံတို့သည် သုံးနိုင်ငံလုံခြုံရေးမိတ်ဖက်သစ် ထူထောင်လိုက်ကြောင်း စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင် ကြေညာခဲ့သည်။အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန် ၊ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် ဘောရစ်ဂျွန်ဆင် နှင့် သြစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ် စကော့မောရစ်ဆန် တို့သည် အွန်လိုင်မှ တစ်ဆင့် ကျင်းပသည့် virtual event အစည်းအဝေးတစ်ခုတွင် ထိုသို့ ကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အစိုးရသုံးခု၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို “AUKUS’’ ဟု အမည်ပေးထားကြောင်း ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်ရပ်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ အဆိုပါ “AUKUS’’ ဟုခေါ်ဆိုသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် လုံခြုံရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးစွမ်းရည်များတွင် သိသိသာသာနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းပူးပေါင်းမှုပြု လုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
AUKUS ၏ ပထမဆုံးခြေလှမ်းအဖြစ် သြစတြေးလျအတွက် နျူကလီးယားစွမ်းအင်သုံး ရေငုပ်သင်္ဘောတစ်စင်းကို ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး သုံးနိုင်ငံအနေဖြင့် ၎င်းအားမည်သို့ပို့ဆောင်မည်ကို ၁၈ လ ကြာ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှု ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ယင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
သြစတြေးလျသည် ဗြိတိန်နှင့်အမေရိကန်တို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ နိုင်ငံ၏တောင်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းမြို့ Adelaide ၌ ရေငုပ်သင်္ဘောများတည်ဆောက်ရန်ရည်ရွယ်ထားကြောင်း မောရစ်ဆန် က မှတ်ချက်ပြု ပြောကြားခဲ့သည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ လန်ဒန်မြို့ ဒေါင်းနင်းလမ်းတွင် ဗြိတိသျှဝန်ကြီးချုပ် ဘောရစ်ဂျွန်ဆင် နှင့် သြစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ် စကော့မောရစ်ဆန် တို့ နှုတ်ဆက်နေသည်ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန် ၁၅ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ– Tim Hammond/No. 10 Downing Street/Handout via Xinhua)
“သြစတြေးလျဟာ နျူကလီးယားလက်နက်များပိုင်ဆိုင်ရန် သို့မဟုတ် အရပ်ဘက်နျူကလီးယားစွမ်းရည်ကိုတည်ဆောက်ရန်ကြိုးပမ်းနေခြင်းမဟုတ်ကြောင်း နှင့် ၎င်း၏နျူကလီးယား လက်နက် မပြန့်ပွား ရေးအားကတိပြုချက်များအတိုင်း ဆောင်ရွက် ရန်သန္နိဌာန်ချထားကြောင်း” ၎င်းကဆိုသည်။
သြစတြေးလျနိုင်ငံက ရရှိမည့် နျူကလီးယားစွမ်းအင်သုံးရေငုပ်သင်္ဘောများသည် သမားရိုးကျ လက်နက်များသာတပ်ဆင်ထားပြီး ၎င်းတို့နိုင်ငံများအနေဖြင့် နျူကလီးယားလက်နက်မပြန့်ပွားရေး က တိပြုချက်များနှင့် အညီ အပြည့်အဝဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဘိုင်ဒန်နှင့် ဂျွန်ဆင်ကဆိုသည်။
AUKUS ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု က မည်သည့်နိုင်ငံကိုမျှကျူးကျော်ရန် မရည်ရွယ်ကြောင်း၊ ၎င်းက မိမိတို့နိုင်ငံများ၏ မဟာဗျူဟာမြောက် အကျိုးစီးပွားတိုးတက်ရေးသာဖြစ်၍ နိုင်ငံတကာစည်းမျဉ်းများနှင့် အညီ လက်ကိုင်ထားဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကာ အင်ဒို-ပစိဖိတ်ဒေသ၌ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ တည်ငြိမ်မှုရှိရေး အဆင့်မြှင်တင်ပေးရန် ရည်ရွယ်ကြောင်းအဆင့်မြင့်အစိုးရ အရာရှိတစ်ဦးက သတင်းထောက်များကို စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
WASHINGTON, Sept. 15 (Xinhua) — The United States, Britain, and Australia announced on Wednesday the creation ofanew trilateral security partnership.
Inajoint statement, the three governments said the partnership, called “AUKUS,” will help “significantly deepen cooperation onarange of security and defense capabilities.”
Australia intends to build the submarines in Adelaide,acoastal city in the country’s south, in cooperation with Britain and the United States, Morrison said in his remarks.
A senior administration official told reporters on Wednesday that AUKUS “is not aimed or about any one country,” claiming that “it’s about advancing our strategic interests, upholding the international rules-based order, and promoting peace and stability in the Indo-Pacific.” Enditem